News | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
News | Tag: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
प्रधानमन्त्रीले पोखरामा सम्बोधन गर्ने शनिबारको बृहत जनसभा स्थगित
कास्की । शनिबार पोखरामा हुने भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षको बृहत जनसभा स्थगित भएको छ ।
पेरिसडाँडामा प्रचण्ड र नेपाल पक्षको भेला
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिटक नेताहरुको भेला हुने भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे पेरिसडाँडामा भेला हुन लागेको हो ।
काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । यसअघि दुई पटक स्थगित भएको सचिवालय बैठक मंगलबार बेलुकी ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको हो ।
काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक मंगलवार बस्ने भएको छ । यसअघि दुई पटक स्थगित भएको सचिवालय बैठक मंगलबार बेलुकी ४ बजे बस्न लागेको हो ।
नेकपाको निर्णयः एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शुक्रबार दिउँसो बसकेको स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुर्खेतका दुई जना नेकपा नेतालाई कोरोना संक्रमण
सुर्खेत । सुर्खेतका दुई जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेतालाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेश अस्पतालरपशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा नेकपा सुर्खेतका सचिव कृष्ण जिसी (जितेन्द्र)र सदस्य रत्न गाहामगरलाई कोरोना संक्रमण भएको हो ।
दुई नेताबीच बोलीचाली नै बन्द !
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सम्बन्ध चिसिएको छ । पार्टीभित्रको जारी आन्तरिक विवाद समाधान गर्न हुँदै आएको वार्तासमेत दुई अध्यक्षको बीचमा हुन सकेको छैन ।
के भयो ओली र प्रचण्डबीचको वार्ता ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादलाई मत्थर पार्न सहमतिको खोजी गर्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको आजको वार्ता पनि बिना सहमति सकिएको छ ।
नेपाली साम्यवादका सूत्रधारः पुष्पलाल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको योगदानको स्मरणमा ४२औँ स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस वर्ष कोभिड–१९ को संक्रमणको कारणले बृहत् कार्यक्रम भने गरिएको छैन । उनको स्मृति दिवसका अवसर पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा अवस्थित पुष्पलाल स्मृति पार्कमा अनौपचारिक कार्यक्रम भएको छ ।